हाम्रो नयाँ भिडियो जाँच गर्नुहोस्! - फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर
फल्स चर्च स्वास्थ्य केन्द्र समाचार
प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन (RHPA) को पारितले हामीलाई केहि चीजहरू परिवर्तन गर्न प्रेरित गर्‍यो: हामीसँग अब एउटा भ्रमणमा गर्भपतन हेरचाह प्रदान गर्ने क्षमता छ। हामीसँग लामो समय सम्म अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि छैन। हामीले नयाँ मेडिकल फारमहरू प्रयोग गर्न थाल्यौं। र अब? हामी हाम्रा भिडियोहरू परिवर्तन गर्दैछौं!
हाम्रो अनलाइन यात्रा / واکथ्रुले FCHC मा दुबै नियुक्तिहरूमा बिरामीले अनुभव गर्न सक्ने कुराको प्रदर्शन गर्‍यो। यद्यपि, चीजहरू परिवर्तन भएका छन् - र अब हामीसँग नयाँ भिडियो छ जुन हामीसँग पहिलेका दुईलाई बदल्छ! यहाँ जाँच गर्नुहोस्:
फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर - हाम्रो केन्द्र भ्रमण गर्नुहोस्!
हामीले पनि अद्यावधिक प्रदान गरेका छौं तीन नयाँ भिडियोहरू जुन हाम्रो इतिहास, मिशन र हाम्रो केन्द्रको गोलमेरी कोडिंग, एफसीएचसीका संस्थापक र निर्देशकबाट लक्ष्यहरू समेट्छन्।
र फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरमा बोर्ड-प्रमाणित स्त्री रोग विशेषज्ञहरू मध्ये एक, हाम्रो डा। जान फ्रुटमैनले तलको भिडियोमा आकांक्षा गर्भपात वर्णन गर्दछ:
फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर - आकांक्षा गर्भपात
कृपया हेर्नुहोस् र हाम्रो केन्द्र को बारे मा जान्नुहोस्!
#कुनै ट्याग छैन
अघिल्लो पोष्ट प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा ऐनले तपाइँको लागि केलाई बुझाउँछ: जुलाई १ र पछाडि…